Tokyo • Body Rub sy NuRu Massage
Ny tanàna tsara indrindra eto an-tany, hita amin'ny fandikan-teny. Aza saro-kenatra - vakio ny Nuru Massage Tokyo anao.
Tokyo (東京, Tōkyō) no renivohitr'i Japon ary tanàna lehibe indrindra eto an-tany. Izy io koa dia iray amin'ireo prefektioran'i Japon 47, ahitana paroasy afovoany 23 sy tanàna, tanàna ary vohitra maro andrefan'ny afovoan-tanàna. Tokyo dia tranon'ny Nuru fanorana. Jereo ny bodyrub ary bodywork safidy koa.